Governemanta ao Nizerià, mandidy ny hamotsorana an’i Omoyele Sowore, mpanao gazety sy mpikatroka ho an’ny zon’olombelona · Global Voices teny Malagasy
Nigadra volana efatra i Sowore fa voampanga ho namadika
Voadika ny 24 Desambra 2019 21:03 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Español, Italiano, English
Omoyele Sowore. Pikntsary avy amin'ny antsafa nataon'ny CNBCAfrica, 13 desambra 2018.
Ny 24 Desambra 2019, niantso ny Sampandraharaham-piarovam-pirenena ny lehiben'ny fampanoavana ao Nizerià sy ny Minisitry ny Fitsaràna, Abubakar Malami “mba hanatanteraka ny didi [m-pitsaràna] mampandoa onitra hahazoana fahafahana vonjimaika an'i” Omoyele Sowore, mpanao gazety sady mpikatroka ho an'ny zon'olombelona, hoy ny tatitry ny gazety Nizeriana Punch
Ny 3 Aogositra 2019 i Sowore no voasambotra tao amin'ny toerana fonenany ao Lagos, Nizerià, ary nampangaina ho mpamadika, mpanao filambaniny amin'ny aterineto sy famotsiambola, taorian'ny antsony hanaovana ny hetsipanoherana #RevolutionNow (revolisiôna izao dieny izao).
Niteraka lahateny fiderana tao an-toerana sy tany ivelany ny fisamborana sy fanagadràna an'i Sowore — na nisy aza didy roa ho famotsorana azy — noho ireo tsy firaharahiana mivandravandra ny atao hoe tany tàn-dalàna ao Nizerià sy ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona.
Sowore, mpanonta ilay gazety fanadihadiana lalina ety anaty aterineto “Sahara Reporters“, dia nirotsaka nifaninana tamin'ny filoha Muhammadu Buhari tamin'ireo fifidianana natao ny Febroary 2019. Ny 6 Desambra, andro iray taorian'ny nanomezana onitra ara-bola an'i Sowore, niverenan'ireo manampahefana avy ao amin'ny Departemantan'ny Fiarovam-pirenena (DSS) nosamborina indray izy, tao anatin'ny faritry ny Fitsaràna Antampony ao Abuja .
Topazo maso ato ny famintinana ny fizotry ny fisamborana an'i Omoleye Sowore (teny aglisy) .
Malami koa dia nandidy ny hamotsorana an'i Sambo Dasuki, mpanolotsaina fahiny momba ny fiarovam-pirenena, nosamborina tamin'ny 1 Desambra 2015, taorian'ny niampangàna azy ho nangalatra vola 2.1 lavitrisa dolara amerikàna tamin'ny alàlan'ny fanomezana fifanarahana ara-tafika tsy misy akory ho an'ny ady fanoherana ilay vondrona Boko Haram mpanao asa fampihorohoroana. Nandritra ny taona roa sy tapany izy no inotànana am-ponja na teo aza ireo didim-pitsaràna marobe namela azy hivoaka rehefa mandoa onitra.
Malami nilaza hoe:
Mifanaraka amin'izay voalazan'ny Toko faha 150 (1) ao anatin'ny Lalàm-panorenana tamin'ny 1999 (nasiana fanitsiana), ary araka ny onitra voafaritra ho aloan'ny Col. Sambo Dasuki (Rtd) (araka ny fanovàna nataon'ny Fitsaràna mpandrava didy); sy ny masombola noferana haloan'i Omoyele Sowore, dia nandidy ny Sampandraharaha misahana ny Fiarovam-pirenena aho hanaraka ny didy manome fahafahana an'ireo voampanga mba handoa onitra ho tambin'ny fahafahana vonjimaika ka hiroso amin'ny famotsorana azy ireo. Izy ro voampanga ireo dia samy voafatotra hanaja izay fepetra voalaza momba ny onitra sy tsy hanao zavatra manohintohina ny filaminambahoaka sy ny fiarovam-pirenena, ary hatramin'ny fitsaràna azy ireo izay mbola an-dàlana araka ny lalàna mifehy ny tany sy ny fanjakàna.
Nibitsika ilay mpanampy ny filohampirenena fa hoe nanome baiko ny governemanta mba hamotsorana an'i Dasuki sy Sowore.
TSELATRA: Didian'ny governemanta federaly ny famotsorana an'ilay Mpanolotsaina fahiny tamin'ny resaka fiarovana (NSA) Sambo Dasuki sy Atoa.Omoyele Sowore avy amin'ny Sahara Reporters, hoy ny Minisitryny Fitsaràna sady Lehiben'ny Fampanoavana ato anatin'ny Federasiôna (AGF), Abubakar Malami, SAN tao anaty fanambaràna iray, androany tao Abuja.
— Bashir Ahmad (@BashirAhmaad) 24 Desambra 2019
Nafahana i Sowore, raha araka ity bitsika avy amin'ny SaharaReporters ity:
TSELATRA: Afaka i @YeleSowore pic.twitter.com/eJl8vTpclq
— Sahara Reporters (@SaharaReporters) 24 Desambra 2019
Raha hamaky mismisy kokoa amin'ireo tatitray momba ny fisamborana sy fanagadràna an'i Omoloye Sowore :
Nanao fangatahana tany amin'ny Firenena Mikambana sy ny Vondrona Afrikàna ireo mpiaro zon'olombelona, noho ny fitazonana ilay Nizeriàna mpitarika hetsipanoherana
Mbola any am-ponja ilay Nizeriàna mpanao gazety Omoyele Sowore noho ny fiampangàna namboamboarina hoe namadika tanindrazana sy nanevateva fitolampirenena